Kenya: “Xoog baan adeegsan doonnaa si aan u xallino khilaafka Soomaaliya!” – Radio Daljir
Juunyo 4, 2019 10:52 g 0
Xiriirka ka dhexeeya Kenya iyo Soomaaliya ayaa sii wiiqmey iyada oo xukunka Maxkmadda Caddaaladda adduunka ee ku saabsan muranka xuduudaha badda ee u dhaxeeya labada dal ee deriska ahi uu aad u dhowyahay.
Warqad diblomasiyadeed oo dawlada Kenya u soo dirtay dawlada Soomaaliya 21kii bisha may 2019 ayey dawlada Kenya ku goodisey in ay awood ciidan u adeegsan doonto haddii Soomaalidu, dhan kastaba ha u dhasheen e, sii wadaan burburinta siliga xuduuda u dhexaysa labada dal ee gobolka Gedo.
“Sii socoshada xannibaada iyo burburinta xayndaabka siliga ah waa in looga jawaabo awood ciidan,” ayaa lagu yiri warqad ay ku saxiixnayd Wasiirka Arrimaha Dibada ee Kenya oo la soo marsiiyey safaaradda Kenya ee Muqdisho iyada oo warqadaasi gaartey Wasaaradda Arrimaha Dibadda Soomaaliya, 25 kii bishan 2019.
Waraaqda ayaa dawlada Kenya waxa ay ku eedeysay Soomaaliya in ay si joogto ah u xakameynayso dhismaha xayndaabka iyada oo adeegsanaysa haweenka iyo carruurta si ay u waxyeeleeyaan shaqaalaha iyo kooxaha dhismaha xayndaabka. Taasina waxa ay khatar ku tahay ammaanka shaqaalaha dhisaya xayndaabka.
“Kenya waxa ay qiimeyneysaa kharashka khasaaraha ay geysteen muwaadiniinta Soomaaliyeed annaga oo dooneyna in magdhow laga bixiyo,” ayaa lagu sheegay warqadda labada bog ah ee uu helay wargeyska Standard.
Kenya oo ka falcelineysa arrinkaas ayaa sheegtay in “markii Kenya ay hakisay dhismaha xayndaabka laba toddobaad sanadkii 2017, ay muujisay heerka ugu sarreeya sabir, niyad-wanaagg iyo waliba dhan saaxiibtinimo iyo deris-wanaag.”
Dawlada Kenya oo sii wadata Hanjebaadeeda ayaa dawlada Soomaaliya ka dalbatay ka jawaabista iyo talaabo ka qaadista dhibaatooyinka Kenya sheeganayso. Kenya waxa ay ku sii dartay:
“Dawlada Kenya waxay filaysaa in Soomaaliya tallaabo ka qaado carqaladaynta dhismaha derbiga xuduudda iyo kahortagga khalkhalgelinta ammaanka muwaadiniinteena.”
Ugu danbayn Dawlada Kenya waxay qoraalkeedda ku sheegtay in ay diyaar u tahay oo ay ka go’an tahay in ay fuliso waxa ay ku tilmaamtay xaqiijinta xudduudeeda iyo dhismaha derbiga labada dal xudduudooda ay ku xirayso Kenya.
Dhanka kale Dawlada Soomaaliya oo warqad jawaab ah u dirtay kenya ayaa beenisey dhammaan eedaha ay soo jeedinayso Kenya.
“Dawladda Soomaaliya waxa ay beeninaysaa dhammaan eedaha aad soo jeediseen,” ayaa lagu yiri qoraalka Dawladda Soomaaliya.
Iyadoo khilaafka xuduuda badda ee ka dhexeeya labada dal uu yaalo maxkamada ICJ da aye dawladda Soomaaliya sheegatay in ay u hoggaansan tahay go’aanka Maxkamada ayna ixtiraamayso xudduuda Kenya, sidoo kalana Kenya laga rabo sidaas oo kale.
“Dawlada Soomaaliya waxay caddaynaysaa in aysan jirin wax dhibaato ah oo muwaadiniinteenu u geysteen derbiga siliga ah ee xuduuda, waa in dawladda Kenya ay nala wadaagtaa caddayn, waana tixgelin doonaa haddaad caddaymo keentaan,” ayaa lagu yiri qoraalka dowladda Soomaaliya.
Dawladda Soomaaliya ayaa soojeedisey in la sameeyo guddi farsamo iyo koox sharci-yaqaano ah si loo xaliyo dhammaan kala aragti duwanaanta labada dal dhextaala.
“Dawladda Soomaaliya waxa ay u xaqiijinaysaa dawladda Kenya in aanu ixtiraamayno xudduudaha dhuleed ee Kenya waxaanuna aaminsanahay sidaas oo kale in dawlada Kenya ixtiraamayso xuduuda dhuleed ee Soomaaliya” ayaaa lagu yiri qoraalka Soomaaliya.
Qoraalada labada dhinac is dhaafsadeen ayaa muujinaya farqiga u dhexeeya labada dal iyo heerka laga joogo diblomaasiyada.
Dawladda Kenya ayaa amartay in diyaaradaha ka yimaada Soomaaliya ay ugu horrayn ka degaan Garoonka diyaaradaha ee magaalada Wajeer. Sidoo kale Kenya ayaa 28kii may xanibtey boorsooyinka aan cidi wadan ee ka yimaada Soomaaliya iyadoo dhanka kale Kenya soo saartay liis ay ku qoran yihiin 66 sarkaal oo Soomaali ah kuwaasoo laga mamnuucay in ay galaan Kenya.
Liiska oo wargeyska Standard si qarsoodi ah u helay ayaa waxaa kamid ah wasiiro uu kamid yahay Ra’isal Wasaare hore oo aanu wargeysku xusin magaciisa, xildhibaano baarlamaan, kuxigeenka taliyaha nabad sugida Soomaaliya, iyo mulkiilayaal shirkado isgaarsiineed Soomaaliya.
Waxaa ku jira liiskan saraakiil Soomaali Kenyan ah oo ay isku qabiil yihiin Madaxweynaha Soomaaliya sida uu qoray wargeyska Standard, waana markii ugu horraysay oo la beegasado Soomaali Keenyaan ah.
Ilo ka agdhow Madaxtooyada Soomaaliya ayaa wargeyska u sheegtay in Kenya waddo dagaal keligeed ah oo ay ku beegsanayso saraakiisha Soomaaliya iyo ganacsato Soomaali ah.
Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Soomaaliya, Axmed Ciise Cawad, ayaa wargeyska Standard u sheegay in Muqdisho aysan diyaar u ahayn in xiisadda diblamaasiyadeed kor u sii kacdo.
“Ma xiisaynayno qaaciidada saxan-saxan ku gud ee waxaan danaynaynaa xiriir wanaagsan oo na dhexmara Kenya,” ayuu yiri wasiir Cawed.
Wasiir Cawed ayaa aad ugu qoslay wararka sheegaya xiriirka Kenya la yeelanayso maamul goboleedyo Soomaaliyeed gaar ahaana maamulka gobolka Waqooyi Galbeed ee Somaliland.
“Dawladda Soomaaliya waxa ay Kenya u oggolaatay in ay qunsuliyad ka furato magaalada Hargeysa, sidoo kale Kenya waxay oggolaatay in aan qunsuliyad ka furano magaalada Mobasa haddii aan u baahano,” ayuu yiri wasiir Cawad.
Wargeyska Standard ayaa qormadiisa ku gabagabeeyey in muranka xudduuda badda labada dal oo Maxkamada ICJ ku dhawaaqi doontaa sannadka danbe, haddii Keenya ku luntana dacwadan ay lumin doontaa 100 KM SQ oo bad oo khayraad dabiici ahi uu ka buuxo.
Siyaasadda & Dhaqaalaha 457 Wararka 17799